Uyibukela njani iDisney + kumabonwakude, i-Emulator.online ▷ 🥇
Uyibukela njani iDisney + kumabonwakude
I-Disney + iqale ngempumelelo enkulu yoluntu nase-Itali, kuba idibanisa ezona khathuni zibalaseleyo zabantwana (ukusuka kwiiklasikhi ezinkulu ukuya kwimveliso ezintsha zePstrong) ngothotho lweTV olukhethekileyo olusekwe kwilizwe le-Star Wars, ngaphandle kokulibala konke Iimovie ezimangalisayo. Ngaphandle kokhuphiswano olomeleleyo oluvela kwiNetflix kunye neVidiyo eNkulumbuso yeAmazon, abasebenzisi abaninzi bakhetha ukugcina iDisney + njengokubhaliselwa okusasazwayo okufunwayo kusapho lonke, ikwanikwe nexabiso lokhuphiswano (okwangoku yi- € 6,99 ngenyanga okanye umrhumo wonyaka wama-69,99, € XNUMX).
Ukuba kude kube ngoku sithintele ukubukela umxholo weDisney + kuphela kwi-PC okanye ubukhulu becala kwithebhulethi, sineendaba ezilungileyo kuwe: Seta iDisney + kuyo nayiphi na iTVNokuba yi-Smart TV okanye i-screen elula ye-TV (ukuba nje inezibuko le-HDMI). Ke, masibone kunye ukuba sibukele njani iDisney + kumabonwakude, ukukholisa abantwana kunye nabazali abanomdla kumxholo okhulileyo kweli qonga.
OKUFUNDILEYO FUNDA: Disney Plus okanye iNetflix? Yintoni engcono neyantlukwano
Bukela iDisney + kumabonwakude
Isicelo seDisney + siyafumaneka kwinani elikhulu lezixhobo zokuzonwabisa zegumbi lokuhlala, ezinje ngeTV zikamabonwakude kunye nezixhobo ezinonxibelelwano lwe-HDMI, ezinokubakho uthathe ithuba le-4K UHD kunye ne-HDR yenkcazo ephezulu yomxholo (ukuba iimeko zenethiwekhi kunye nezixhobo ezisetyenzisiweyo ziyakuvumela oko). Ukuba asikabinayo i-akhawunti ye-Disney + okwangoku, kungcono ukuyifumana ngaphambi kokufunda iingcebiso ezikwizahluko zesi sikhokelo; Ukurejista iakhawunti entsha, yiya nje kwindawo yokubhalisa esemthethweni, faka idilesi ye-imeyile efanelekileyo kwaye ulandele imiyalelo enikezwe kwiscreen.
I-Disney + kwi-Smart TV
Ukuba sinayo Kutshanje Smart TV (LG, Samsung okanye i-Android TV) singonwabela umxholo weDisney + ngokufikelela kwivenkile yesicelo kunye nokukhangela usetyenziso I-Disney +.
Emva kokufaka usetyenziso, cofa iqhosha kulawulo olukude ukuvula icandelo leSmart, cinezela usetyenziso lweDisney + kwaye ungene ngeenkcukacha ezisephetheyo. Ukusuka kwi-Smart TV sinokuxhamla kuyo yonke imixholo ekumgangatho ophezulu, sisebenzisa (ukuba umabonwakude uyahambelana) ikwinkcazo ephezulu ye-4K UHD kunye ne-HDR; Ukufumana olona mgangatho uphezulu, kufuneka uqhagamshelo olukhawulezayo lwe-intanethi (ubuncinci i-25 Mbps yokukhuphela), kungenjalo umxholo uya kudlalwa kumgangatho osemgangathweni (i-1080p okanye iphantsi). Ngolwazi oluthe kratya, sicebisa ukuba ufunde isikhokelo sethu. Ukudibanisa njani i-Smart TV kwi-Intanethi.
I-Disney + kwimidlalo yomdlalo
Ukuba sidibanisa ikhonsoli yomdlalo wamva nje (PS4, Xbox One, PS5, okanye Xbox Series X / S.), singayisebenzisa ukubukela umxholo weDisney + ekuphumleni phakathi kweseshoni yomdlalo kunye nenye, sixhamla kumgangatho ofanayo esiya kuwufumana kwi-Smart TV.
Xa ikhonsoli sele iqhagamshelwe kumabonwakude nge-HDMI, sinokujonga umxholo weDisney + ngokusisa kwibhodi yeconsole (ngokucinezela iqhosha lePS okanye iqhosha leXBox), uvule icandelo Isicelo O Izicelo kunye nokuvula isicelo I-Disney +, esele ikhona ngokungagqibekanga kuzo zonke iziqulatho ezichaziweyo. Ukuba asikwazi kufumana usetyenziso olufakelweyo, konke ekufuneka sikwenzile kukuvula ivenkile yokudlala okanye iqhosha lokukhangela kunye nokukhangela usetyenziso. I-Disney + phakathi kwezi zikhoyo. Nditsho nakwizinto ezinokubakho kunokwenzeka ukuba usebenzise i-4K UHD kunye ne-HDR (ukuba iTV iyahambelana nayo), kodwa kuphela ukuba sineenguqulelo ezinamandla kakhulu zentengiso ezikhoyo ngoku (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 kunye neXbox Series X / S) .
I-Disney + yeTV yakho yoMlilo
Ukuba asinayo i-Smart TV okanye isicelo esizinikezelweyo asikho, sinokuyilungisa ngokukhawuleza ngokudibanisa I-dongle Fire TV Stick, Iyafumaneka kwiAmazon engaphantsi kwe- € 30.
Emva kokudibanisa iTV yoMlilo kwiTV (ulandela imiyalelo ebonwe kwifayile yethu isikhokelo esizinikeleyo), Khetha umthombo olungileyo kwiTV, vula icandelo IziceloSijonge iDisney + phakathi kwabo bakhoyo ngokusilelayo kwaye ungene. I-TV ye-Fire Stick rhoqo kunye nezixhobo zeLite zixhasa umgangatho womgangatho (1080p okanye ezantsi) ukuba sifuna umxholo weDisney + kwi4K UHD kuya kufuneka sigxile Umlilo weTV TV 4K HD HD, Iyafumaneka kwiAmazon ngexabiso eliphezulu (€ 60).
Disney + iChromecast yakho
Esinye isixhobo esidumileyo sokudlulisa esikhoyo ngoku kuwo onke amakhaya Google Chromecast, Efumaneka ngokuthe ngqo kwiGoogle site.
Emva kokudibanisa i-HDMI dongle kwi-TV kunye ne-Wi-Fi yasekhaya, sivula usetyenziso lweDisney + kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu (sikhumbuza ukuba isicelo siyafumaneka kwi-Android kunye ne-iPhone / i-iPad), singena kunye neziqinisekiso zenkonzo, sikhetha Umxholo oza kuphinda uveliswe kwakhona kwaye, nje ukuba ubekhona, sicinezela iqhosha elingaphezulu Ukukhupha, Ukuhambisa ividiyo kwiTV ngeChromecast.
Disney + yakho Apple TV
Ukuba siphakathi kwabo banethamsanqa abanini beApple TV kwigumbi, singayisebenzisa ukuya ubukele iDisney + ngowona mgangatho uphezulu.
Sebenzisa iDisney + kwisixhobo segumbi lokuhlala esinophawu luka-Apple, sivule, yiya kwipaneli yenkqubo, cinezela usetyenziso lweDisney + kwaye ufake iziqinisekiso zokufikelela; ukuba isicelo asikho, sivula iVenkile yeVenkile ezinikezelweyo, siyakhangela I-Disney + kwaye uyifake kwisixhobo. Kuba iApple TV iyathengiswa ixhasa I-4K UHD kunye neHDR Ngayo, kuyakwazi ukujonga umxholo weDisney + ngowona mgangatho uphezulu, ukuba nje umabonwakude uyahambelana nezi teknoloji kwaye ukuba sinomnatha okhawulezayo we-Intanethi (njengoko sele kukhankanyiwe, kufuneka ukukhuphela i-25 Mbps).
Ukuzisa iDisney + kumabonakude wethu kunyanzelekile ukuba siyisebenzise le nkonzo yokusasaza, kuba eyona mgangatho uphezulu ifumaneka kuphela ngokuseta usetyenziso kwi-Smart TV okanye ukusebenzisa enye yeendlela ezichaziweyo kwesi sikhokelo. Kubo bonke abasebenzisi abaneTV elula yescreen ngaphandle kokusebenza ngokukuko fumana i-Fire TV Stick okanye iChromecast ukufikelela kumxholo weDisney + ngokukhawuleza nangokulula.
Ukuba singabalandeli abakhulu bomxholo wenkcazo ephezulu, uya konwaba ukuqhubeka nokufunda amanqaku ethu Uyisebenzisa kanjani i-4K kwi-Smart TV mi Zonke iindlela zokubukela i-Netflix kwi-4K UHD. Ukuba, ngokuchaseneyo, sifuna ezinye iinkonzo ukubukela iikhathuni zokuhambisa kwiTV, qhubeka ufunda isikhokelo sethu. Bukela iikhathuni zokusasaza kwi-intanethi, iisayithi kunye neeapps simahla.
Yintoni ukulandelwa kwemitha kwaye ngawaphi amakhadi evidiyo ekhoyo?
Uyenza njani i-pixel art evela kwii-PCs, ii-smartphones kunye neepilisi
Ungalongeza njani ikhadi kuGoogle Play nakwiVenkile yeApple
Eyona ndlela ifanelekileyo yokuKhowuda
Eyona midlalo yehlabathi evulekileyo ye-Android kunye ne-iPhone
Ungasilawula njani isantya semidlalo kwiPC
Ungazikhubaza njani zonke iisenzi kwi-smartphone yakho
Eyona midlalo ilungileyo yokunxiba kunye nefashoni ye-Android kunye ne-iPhone
Uyisebenzisa kanjani i-eGPU kwiMacBook ukuphucula ukusebenza kwe3D
Ungakukhubaza njani ukubhaliswa kwi-Android, i-iPhone, i-iPad, kunye Windows 10
Olunye uhlobo olusebenzayo kwizicelo zikaGoogle